Nokia 3310 4G Ngosipụta zuru ezu ekpughere Gam akporosis
Nloghachi nke Nokia na 2017 hapụrụ ozi ọma nke ọtụtụ ndị ọrụ jiri ịnụ ọkụ n'obi natara. Firmlọ ọrụ ahụ malitere ọhụrụ version nke kpara 3310. Ọnwa ole na ole gachara, na Septemba, arụpụtara ngwaọrụ ọhụrụ na 3G. Na njedebe nke 2017, ekwuputakwara na ụdị nke atọ nke ekwentị ga-aga ahịa. Ọ bụ Nokia 3310 4G, ya mere dị ka aha ya na-egosi na ọ na-akwado 4G.
A maara ụdị ngwaọrụ a ka ewepụtara ya na 2018 niile. Mana, onweghị ozi gbasara ụbọchị enwere ike. Ke adianade do, nkọwa zuru ezu banyere Nokia 3310 ọhụrụ a. Ruo ugbu a.
N'ikpeazụ, ekele dị iche iche nkwụsị na TEENA ihe Nkọwapụta ụdị zuru ezu na 4G site na ekwentị Nokia dị egwu. Ozi ọma nke na-enyere anyị aka ịlele ma ọ bụrụ na agbanweela ngwaọrụ ọhụrụ a. Gịnị ka anyị pụrụ ịtụ anya ya?
Ihuenyo: 2,4 sentimita asatọ (240 x 320p).
Nhazi: isi abuo clocked na 1,5 GHz.
Nchekwa ime: 512 MB gbasaa iji kaadi microSD ruo 128 GB.
Ebe nchekwa RAM: 256 MB
Rear igwefoto: 2MP
BatrịIkike: 1200 mAh.
SystemAha ngwa: YunOS 5.2.0.
Akụkụ: 117 x 52,4 x 13,35mm.
Ibu ibu: 73,5 g.
Ugbo: LTE 38, 39, 40, 41 na kwa VoLTE.
N'ozuzu O siri ike ịhụ mgbanwe ọ bụla na ụdị 3G nke ngwaọrụ ahụ nke ruru ahịa na Septemba gara aga. Yabụ na ọ dị ka ụlọ ọrụ ahụ achọghị ịgbanwe usoro ọ maara na ọ ga-arụ ọrụ nke ọma maka ya. Nokia 3310 a na - arụ ọrụ ma nwee ndị na - ege ya ntị.
A na-atụ anya ka ngwaọrụ ahụ kụrụ ahịa na agba abụọ dị iche iche. Otu ndò na-acha anụnụ anụnụ na otu n’ime oji. Ma, ha nwere ike karịa, ebe ọ bụ na nsụgharị ndị gara aga dị na ngụkọta nke agba anọ. Ugbu a amabeghi mgbe 4G nke Nokia 3310 a ga abia. Ya mere, anyị ga-ege ntị na ozi ọ bụla gbasara ngwaọrụ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » E gosipụtara Nokia 3310 4G nkọwa
Huawei Mate 10 Pro ga-abata na United States na Jenụwarị 9